Faahfaahin ka soo baxaysa howlgalo ciidanka PSF ay ka wadaan Buuraleyda Galgala (Dhageyso)
Wararka lagu kalsoon yahay oo naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka bari ayaa sheegaya in ciidamada PSF ay weeararo kala duwan ku qaadeen fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen Buuraleyda Calmadow .
Ciidamada PSF iyo kuwa Daraawiishta ayaa xiray dhamaan wadooyinka soo gala buuraleyda Galgala iyaga oo diidan in gurmad raashin ama dawo u tago kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanay buuraleyda Galgala.
Wararka soo gaaray Halgan.net ayaa sheegaya in uu jiro Khasaaro gaaray labada dhinac waxaana ciidamada PSF u suurto gashay in ay la wareegaan fariisimo Al-Shabaab ku lahaayeen buuraleyda Galgala.
Wasiirka Wasaarada Amniga Maamulka Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa faah faahin ka bixiyay dagaal Ciidamada Puntland ay ku qaadeen buuraleyda Galgala gaar ahaan Madarshoon.
Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa sheegay in fariisimo badan oo Ciidan ay Al-shabaab kala wareegeen sidoo kalena ay khasaare u geysteen wuxuuna sheegay in howlagalad ay sii socon doonaan.
Wasiirka Wasaarada Amniga Maamulka Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa tilmaamay in Maamulka Puntland ay ka go’an tahay sidii kooxda Al-Shabaab uga saari lahaayeen buuraha Galgala .
Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa ugu baaqay shacabka Puntland in ay la shaqeeyaan ciidanka amaanka wuxuuna sheegay in Al-Shabaab dhib ku yihiin Muslimiinta iyo midnimada umada Soomaalyeed.
Hoos ka Dhageyso Wasiirka Wasaarada Amniga Maamulka Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) oo faahfaahin ka bixiyey howlagalada ciidanka PSF ka wadaan buuraleyda Galgala.(VOA)